Usula ntoni, phi, kutheni & njani
Itekhnoloji yokusula yelizwe jikelele ekhethiweyo Ngo-2009 ispunlace sikhokelela kwiitoni ezingama-358,600 kunye ne- $ 5.5 yezigidigidi kwintengiso, phantse isiqingatha sentengiso iyonke. Oku kulandelwa yi-airlaid, enezigidi ezili-188,287 kunye neentengiso ezixabisa i-2.3 yeebhiliyoni zeedola ngo-2009. Obunye ubuchwephesha obuphambili kubandakanya amakhadi ...
Kutheni ukosula iintsholongwane kungabuyi
Ngelixa iphepha langasese libuyele kakhulu ezishelifini ukusukela oko kuthengwa ngexhala kweentsuku zokuqala zobhubhane ngoMatshi, ukusula iintsholongwane kusasilela. Isityalo sokuvelisa iphepha seProcter kunye neGamble ePennsylvania asikaze sikufumanele ukunqongophala kwezinto ezingafunekiyo kuba umgubo waso uza ikakhulu ...
I-Walmart inika ingxelo yokunqongophala kwephepha langasese kunye nezinto zokucoca kwezinye iivenkile
INew York (i-CNN yeShishini) Abathengi baphinde balayishe iimpahla zephepha kunye nezinto zokucoca kwiindawo zaseMelika ezibethwe ngamandla kukunyuka kosulelo lwe-coronavirus, okukhokelela kwiishelufa ezingenanto kwezinye iivenkile zaseWalmart. Amagosa eWalmart (WMT), oyena mthengisi mkhulu kweli lizwe, utshilo uLwesibini ...
Iipilisi ezili-10 eziphezulu zeMicrofiber kwii-2021 zeeNkcazo
Kutheni le nto iitawuli zemicrofiber zifumene igama elidumileyo kule minyaka idlulileyo? Ngokuqinisekileyo le yingxoxo enkulu kumaqonga awahlukeneyo ngokusebenza kwe-microfiber. Kodwa, ukuba kukho into etsala umdla okhathazayo, zininzi izinto ezintle ngayo. Abaphandi bezenzululwazi bangqine ukuba ...
Iingcebiso zokubulala iintsholongwane kwimpahla yakho ngexesha le-COVID-19
Iingcebiso zokubulala iintsholongwane kwimpahla yakho ngexesha le-COVID-19 nge-20 Matshi 2020 Ngelixa uninzi lwethu luhlala ezindlwini kwaye lusenza umgama ekuhlaleni, baninzi abantu abangenalo olo lonwabo kwaye kufuneka bashiye amakhaya abo benze izinto ezinje ngomsebenzi okanye ukuya ivenkile ukukhetha izinto eziyimfuneko. Ke, ukuba ...
Indlela eyiyo yokusebenzisa iLysol Wipes
Ukubulala iintsholongwane njengosukelo olufana nolweLysol, Clorox, kunye negeneric brand zilula, kulula ukuzisebenzisa, kwaye inokuba yindlela efanelekileyo yokususa iintsholongwane kwiindawo eziqinileyo ekhayeni lakho ukuba uzisebenzisa ngendlela eyiyo. Ngaba unetyala lalo mkhwa? Ukholelwa ukuba zonke izinto ezesulwayo zenziwe zalingana.
Iingubo ezi-7 ezilungileyo zeMicrofiber zango-2021
Imiqolo emikhulu enobubanzi bokusula i-substrate ifakwa koomatshini apho batywinwa kububanzi obufunekayo. Ilaphu elingalukwanga lifakwa kumatshini wokutyabeka apho isigaba solwelo sisetyenziswa ziindlela ezininzi: ukuqhuba okungalukwanga ngomkhombe wesisombululo, ukutshiza amashiti ngotywala ...
Ukunyuka kwimfuno yokususa iintsholongwane kusula ukukhula, ingxelo
I-OHIO-Umzi-mveliso osula i-nonwoven wehlabathi uya kufikelela kwi-US $ 19.64 yezigidigidi ngo-2020, njengoko ukubulala iintsholongwane kunye nezinye izinto ezingasuswanga zibonwa njengezixhobo ezibalulekileyo zokuthintela ukusasazeka kwesifo secoronavirus. Ukususa iintsholongwane ekosuleni ukukhula kweetoni ngo-2020 kuya kuba ngama-36.8%, ngokweenkcukacha ezivela kuSmith omtsha ...
UmThengisi uyathintela ukusula amanzi e-UK nase-Ireland
IHolland kunye neBarrett ibhengeze ukuvalwa ngokupheleleyo ekuthengisweni kwazo zonke iimveliso ezimanzi ezisulwayo kwiivenkile zayo ezingama-800 zase-UK naseIreland, nazo zonke iimveliso ezimanzi ezisulwayo kunye nezinto ezahlukileyo zitshintshwe zezinye ezinobuhlobo nokusingqongileyo ngokuzinzileyo ukuphela kukaSeptemba 2019. kuthengiswa e-UK ...
I-PLMA yazisa nge-PLMA ngokuBukhoma! Iveki yeleyibheli yabucala ngoFebruwari 1-5
ENTSHA YORK-Umbutho wabaenzi beeleyibheli babucala wonwabile ukubhengeza isiganeko esitsha nesingazange sibonwe ngoFebruwari 1-5, 2021: PLMA Live! Yenza iVeki yeeleyibheli yaBucala. Isibhengezo siza njengoko uMbutho ufumene kufanelekile ukuba urhoxise umboniso we-2020 weLebhu yoRhwebo lwaBucala ...
IZITORO ZOKUGQIBELA ZIBEKA UMDA OMTSHA WOKUTHENGA KWI-WIP ENGASETYENZISWA
Nge-6 kaNovemba, ishishini le-CNN lakhupha inqaku likaNathaniel Meyersohn elinesihloko esithi "Ezinye iivenkile zokutya ziyalinciphisa iphepha langasese kunye nokubulala iintsholongwane." Esi siqwenga sichaze ukuba ezinye zeekhonkco ezinkulu zelizwe sele ziqalisile ukubeka umda ekuthengeni o ...
Imarike yokusula engafakwanga kulindeleke ukuba ifikelele kwi-19.6 yezigidigidi ngo-2021
(E-UK, 28 kweyeNkanga ngo-2016) Ikamva leZinto ezingasuswanga kwi-2021 ithi imarike yokusula engafakwanga yixabiso elixabisa i-14.8 yezigidigidi zeerandi kwaye iza kudla i-1.1 yezigidi zeetoni ze-nonwovens ngo-2016. Ukusetyenziswa ukukhula ukuya kwi-1.4 yezigidi zeetoni ...